Yintoni Eyona Ncinci Nangona Indlu YeNdlu Yesiko?
Ukuthengisa i-Minimal Style Style ukuya kuma-1940 eMelika
Ukulungiswa okuncinci emva kokudakumba okukhulu
Ikhasi leMveli leMveli, eliMhlophe ngeeNqindi eziMnyama. Ifoto nguJ. Castro / Moment Imfono / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Amathuba amahle ukuba abaninzi baseMelika bahlala "kwinqanaba elincinane" lendlu ngexesha elithile. Ukubonisa umdaka omncinci kodwa wemveli ekwakheni, le mizi engabizi kodwa eyakhayo yakhiwa ngamanani amaninzi kulo lonke elaseUnited States evela kwi-Great Depression ye-America ukuya ekupheleni nasekubuyiseni kwiMfazwe yehlabathi II. Ukuchazwa kuMkhombandlela weSikolo kaMcAlester kwiiNdlu zaseMerika njengeNkcubeko encinci , ubugcisa bobuchule obusebenzayo, busebenzayo, kwaye abukho.
Njengoko amaMerika aphumelela ngakumbi, le "style vanilla" isilahlekelwa yintando yakhe. "I-Minimal" yafa ngaphandle ngelixa ezinye izakhiwo ezintle zaziwayo. Abaphuhlisi bazama ukuphucula le "ikhaya lokuqala" ngokungongeza iinkcukacha ezininzi zokwakhiwa-ezibonwe apha ziyi-shutters kunye nesigxina phezu kwendlu yangaphambili. Indlu icwangcisa kula maphepha alandelayo, ngokukodwa "i-Panarama," "iColonial Heritage" kunye ne "Contemporary View," ibonisa indlela abaphuhlisi be-1950 abazama ngayo ukuthengisa iimpahla eziluhlu kubaphulaphuli abanamhlanje.
UMartin, uSara K. et al. Imfazwe yeHlabathi yeMfazwe yesiBini i-Residential Architecture eMaine: Isikhokelo sabaPhando. IKhomishoni yokuLondolozwa kweMbali yaseMaine, 2008-2009. I-PDF ifumaneke ngoFebruwari 7, 2012.
McAlester, Virginia kunye noLee. Isikhokelo seKhaya kwizindlu zaseMerika . Inew york. UAlfred A. Knopf, Inc. 1984.
"I-Nosegay" - Ngokugqibeleleyo i-Symmetrical With Attachment Garage
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezelwa kweNdlu yoLuntu oluNcinci olubizwa ngokuba yi-Nosegay. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
"I-pitgay" yincwadana encinci yeentyantyambo, echaza ngokucacileyo le nto yokwakha yasekhaya. Eyona nto ihlotshiswe ngokuqhaqhafaza i- cross cross , yonke iinyawo ezili-818 zale ndlu ekhulayo iya kwenza isiqalo esihle kuyo nayiphi na intsapho.
Kutheni le nguMdabu oMdabu weMveli?
encinci (ngaphantsi kweenyawo ezili-1 000), enye ibali ene-attic
uphahla oluphantsi okanye oluthatyathwa ngokulinganayo, olunexabiso elincinci
kwicala elibhekiselele kwi-gable cross
ukungena emnyango wangaphambili phantsi kwesigxina sokuqala
ukukhangela kwangaphandle kweenkuni, izitena, okanye ukuxuba ukuhamba
UkuThengiswa kwesi Cwangciso seNdlu:
Iigaraji ezidibeneyo zangezinye ezongezelelweyo, kodwa ngokuqhelekileyo "zaziqhotyoshelwe," njengoko kuCwangciso soMgangatho weKhaya elincinci laseKapa. Ukuvumelanisa ngokubandakanya igaraji kwidizayini ibhenela kubameli be-post-WWII. Thelekisa le ngqungquthela yegaraji kunye neConalol "al Camalot ". I-Neocolonial inkulu kunye nokuhlobisa ngaphezulu. Umgangatho omncinci wenyusa ukukhula-ukwandiswa kwinqanaba lomgangatho wesibini lenza ukuba lo uyilo lusekhaya elinokuthengwa kakhulu, olufana nelo lwakhiwo lwekhaya laseLarchwood.
"Ummelwane omnandi" - i-Petite Modern Bungalow
Ngo-1950 IsiCwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yoLuntu oluNcinci lweNdawo ebizwa ngokuba ngumNelwane omhle. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe
Ngaphandle kobuncinci bayo obuphantsi kweenyawo ezili-1 000 zenyawo, lo mbono awubukeli nto efana ne- American Bungalow . Igama elithi "bungalow" lingaba ligama elidumileyo kunye elimema ngaphezu kwe-non-sexy-sexy "yendabuko".
encinci, ibali elilodwa kunye ne-attic
Ukutsala abantu abahamba phambili, lo mhlaba uthengiswa "njengokwamaKoloni ngokobugcisa" endaweni yokwakha "ubuncinane". Thelekisa ngakumbi iipoloni ezigciniweyo zezithuba zamapolki kunye nezithuba ezingaphantsi kweeport ze-design yasekhaya yaseNosegay.
"I-Space Quit" - I-Charm kunye noQoqosho
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yoLuntu oluNcinci lweNdawo yeNdalo ebizwa ngokuba yi-Quiet Space. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Akuzona zonke izinto ezizimeleyo zeMveli zendalo eziye zibheke phambili, njengoko kubonwe kwindlu yaseNosegay. "I-Space Quiet" ingabonakaliswa ngokulula njengendlela yesimatshana samanqamanje , ngokufana nesicwangciso sezindlu sokuzinza esithengiswa yinkampani efanayo. Iifestile zanamhlanje, ipalagi ebanzi phambili, kunye nomlilo oqaqambileyo kunye nefomyi yakha i-ranch elula okanye "encinci". Ngalesi sikhathi kwimbali yokwakha yaseMelika, ii-designs zokuhlala kunye nezitayela zaxutyushwa ukuba zibhenele kwiindawo ezikhulayo kunye ezahlukahlukeneyo.
encinci, okanye ngaphandle kwesakhiwo
Le yindlu encinane kakhulu okanye ingenanto yokuzikhethela. Ukubonelela kwigumbi elisebenzayo endaweni yezitekisi zangaphantsi kuyona ndlela inomdla kumntu ozayo kwikhaya.
"Umdlali wezemidlalo" - I-Minimal Colonial-Like Tradition
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yoLuntu oluNcinci olubizwa ngokuba yi-Sportsman. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Unyawo olungamakhulu angama-795 "ikhaya elincinane kwikamelo" liquka i-dinette ejongene nephambi. Ezinye izinto ezincinci zezinto eziqhelekileyo zeli xesha zineendawo zokutya ezikwindawo yesitalato, ezibandakanya i-Sweet Neighbor, i-Quiet Space, i-Panarama, kunye ne-Larchwood.
Khawujonge umzekeliso. Ngubani onokumelana nomntwana ngeHula Hoop ®? Kumele ukuba nguyena "Umdlali wezemidlalo" wendlu.
"I-Birchwood" - Indlu encinci, indlu yezitena
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yeNdlu yoLimo oluNcinci olubizwa ngokuba yiBirchwood. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Kwimigangatho engama-903 e-square, lesi cwangciso sesiseko songeza umzekelo wodonga olondoloziweyo lwendawo yokugcina, "kwi-Orderroom Limited".
Ukungena emnyango wangaphambili kufuphi nomgca ongaphambili
Ukuthengwa njenge "indlu yezitena ekhaya elitlanu," iwindow yangasecaleni lesitrato iphakamisa lo Mgaqo oyiMveli. "Ukwenza lula kweKolonial yangaphandle," kuchaza ikopi kwesi sicwangciso soyilo, "ngokuqinisekileyo ilandela indlela yokuhlaziya."
"I-Larkwood" - I-Minimal Cod Charm
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezelwa kweNdlu yoLuntu oluMdabu lweNdawo yangokuthiwa yiLarchwood. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Abanye bangabiza ngokuthi "I-Larchwood" isicwangciso sekhaya seCape Cod yesimanje, esifana nesakhiwo sekhaya saseCranberry esathengiswa yinkampani efanayo. Ukuqulunqwa kweMveli kwindabuko kubandakanya izitayela zendabuko. Igama lerch luhlobo lomthi womthila, ngokunjalo i-larchwood yinto efana neepineyini eziqhelekileyo. Ngama-square angama-784 eenyawo, indlu ingasebenzisa loo pine ukuze yenze igalaji encinane. Eli garaji linyawo elincinci kunegaraji lePanarama, kodwa zombini idizayini isebenzise ukudibanisa umoya / igaraji ukwenzela ukudala ububanzi obubonakalayo.
Izidalwa zendawo zokuhlala ziye zadalwa ukuba zibhenele kwiindidi ezahlukahlukeneyo zaseMerika. Njengendlela yokwakhiwa kwe-Nosegay, ukwandiswa kumgangatho ophezulu uphakanyiswa njengendlela yokukhetha. Igalaji eqhotyoshelweyo yayiyongezwa ngokuthandwayo kubemi-emva kwemfazwe-nangona ungenayo imoto, abahlobo bakho babecinga ukuba wenze.
"I-Contemporary View" - I-Modified Contemporary Design
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yeNdlu yoLuntu oluNcinci kunye neNguqulelo zanamhlanje. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Kwimitha engama-1,017 i-square, le cwangciso-mgangatho luyilo olukhulu kwi-series ye-Mid-Century Minimal Traditional Floorplan. Ngamanye amaxesha isitayela somdabu esibizwa ngokuba yi-Minimal Modern.
ukuxutywa kwimizila yangaphandle
Njenga-Design Quiet Space, "I-Contemporary View" kukuxutywa kwezitayela, kuquka i-ranch, i-modern, kunye neyendabuko. Uphahla kunye nentsimbi zifana neendlela zokurhweba, ezifana nezo zifumaneka kwi- "Gables" House House , kodwa ukusetyenziswa kwebhokisi yeglasi kunye neefestile zekona kunika "ukujonga kwangoku." Ukuguqulwa kwamanqaku okwakhiwa kwezinto eziqhelekileyo kuzakukwenza ukuba kube yinto ekhethwa ngabantu ababanini baseMelika.
"Ifa leColonial Heritage" - Ukubambisana kwiBrick kunye neSakhelo
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yeNdlu yendlela yamandulo ebizwa ngokuba yiColonial Heritage. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Leli dolophu elincinci leenyawo ezili-965 libonisa ubuncinane iifestile ezintathu kwisicwangciso-kwindawo ehlala kuyo, indawo yokudlela, kunye nekamelo lokulala. Iifestile zeBa zinika indawo engaphakathi kwaye zakha i-architectural external architecture. Iifestile ze-Bay zithatha "ukwandisa" ukucwangciswa komncinci.
uphahla oluphantsi okanye oluthatyathwa ngokwemodaka, kunye ne-overhang encinci (ngaphandle kwendlu yangaphambili)
umgca wecala, kunye nomgca ongaphambili ojongene nomgca
iifestile kwiwindow engaphezulu
Ukuhlobisa okuncinci kunokuba nzima ukuthengisa, ngoko ke iinkcukacha zobungqina zange zongezwa. Ukongezelela kwiifestile zee-trio, iwindi leyindlu yefestile ngaphakathi kwezitena likhuthaza ukuhlaziywa kwangoku "kwilifa lemveli". Iindidi ezahlukeneyo zeefestile, iingcango kunye nokugqithisa "kwandisa" umhlobiso walo mhlaba oMdabu weMveli.
"I-Panarama" - iGables Front Gables
Ngowe-1950 isicwangciso soMgangatho kunye nokunikezwa kweNdlu yoLuntu oluNcinci lweNdawo ebizwa ngePanarama. Ifoto © Buyenlarge / Archive Photos / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Njengacebo lezindlu zeColonial Heritage, "iPararama" ineenkcukacha ezifana neeforaki, iikholoni kunye nezindlela zendlu zanamhlanje.
ukungena emnyango wangaphambili phantsi kwegridi yangaphambili
Kutheni le nto yindlu eVernacular?
"Ulwakhiwo lwamaColonial" luchaza isicatshulwa socwangciso lwezindlu, kodwa luvela koloni? Abathuthuli maxa wambi babiza izindlu zendlela edibeneyo "neocolonial" okanye "UbuKoloni," kuba isitayela asiyi ndawo. Abanye baye babiza le zindlu ngeelwimi . Esinye isikhokelo sensimi sichaza izindlu zelwimi eziqhelekileyo ngokuthi "ezo zinto zilula kakhulu zineenkcukacha ezaneleyo ukuze zilungele indlela yokwakha, okanye zidibanisa izinto ezivela kumaninzi amaninzi indlu engenakukwazi ukuhlulwa." *
Umoya ogqithisiweyo kunye negalaji eqhotyoshelweyo kusetyenziselwa ukudala ububanzi kwiplani, efana nesicwangciso sezindlu saseLarchwood. Ubunzulu bubandakanya kwakhona kwii-square eziyi-826 ngeenyawo "ngephiko eliphambili" elenziwe ngeglasi. Uhlobo olufanayo lusetyenziswa kwiifestile zendawo kwiColonial Heritage plan plan.
* SOURCE: UMartin, uSara K. et al. Imfazwe yeHlabathi yeMfazwe yesiBini i-Residential Architecture eMaine: Isikhokelo sabaPhando. IKhomishoni yokuLondolozwa kweMbali yaseMaine, 2008-2009, iphe. 34. I- PDF kwi-intanethi [yafikelela ngoSeptemba 19, 2012].
IziCwangciso zeNdlu ezine-Quarter-Favorites kusukela kwi-1900 yokuqala
4 I-Bungalows evelele evela kwi-Craftsman, ngo-Septemba 1916
IziCwangciso zeNdlu zeCod Cod ka-1950 iMelika
IiNgingqi zeBungalow - Iifoto zeNdwendwe zeNdlu ezincinci
Ukwakha Ukugcina Amandla
I-Queen Anne Architecture e-USA
I-Primer kwi-Architecture yeGreen kunye neGreen Design
Ukuveliswa kwezakhiwo zoLwakhiwo lweHlabathi le-18 leminyaka yamafama
Umbono wamaKatolika oMsindisi
Kuphi ukuthenga iSalpeter okanye i-Potassium Nitrate
IMfazwe Yehlabathi II e-Asia
I-Best Batman Comic Book Crossovers
Isikhokelo soMqala ukuba uhambe ngesiTywala
Ukusebenzisa 'i-Gustar' Ngaphezulu kweSifundo esinye
Izinto ezi-10 eziphezulu zokumazi ngoZachary Taylor
Imbali ye-Iron Lung-Respirator
Indlela i-@ @ okanye kwi-Symbol eya kusebenza ngayo ngesiSpanish
Indlela yokuhlala uphapheme & Funda
Ukubala Ixabiso Lomhlaba Omkhulu Ukusebenzisa Ixabiso Longeziweyo
IMusicical Music for Funerals
Ngaba amaphephancwadi afile okanye ahlaziywe kwixesha leendaba zedijithali?
Donatello Udwebo lwegalari